Duqeyn an kala joogsi laheyn oo ku socota Maqale iyo ciidanka Itoobiya oo kaabiga u saaran… | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Duqeyn an kala joogsi laheyn oo ku socota Maqale iyo ciidanka Itoobiya...
Duqeyn an kala joogsi laheyn oo ku socota Maqale iyo ciidanka Itoobiya oo kaabiga u saaran…
Wararkii u dambeeyey ee laga helayo magaalada Maqale ayaa sheegaya in duqeyn culus lagu qaaday magaaladaas, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey in uu si rasmi ah u muuqdo in uu bilowday dagaal culus oo ah kii la doonayay in guud ahaan lagu qabto magaalada.
Dagaalka waa mid ka duwan maalmihii u horeeyay ilaa markii uu bilowday, waxaana warar madax banaan ay sheegayaan in hubka culus oo dhan laysku adeegsaday oo ay ku jiran diyaaradaha oo garaacid ka bilaabay Maqale, kuwaas oo khasaare gaystay.
Wararkii u dambeeyey ayaa sheegaya in la maqlayo Hugun culus oo dhammaan magaalada laga maqlayo, sida ay tabinayso Reuters.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ay docweerar halis badan ka sameeyeen nawaaxiga Maqale oo ay ku wajan yihiin gudaha Caasimada Tigre, tan iyo shalay sadex jiho oo muhiim ah ayay qabsatay Dawladu.
Hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa qoraal uu u diray wakaalada wararka ee Reuters ku sheegay inay duqeyn culus ku socoto Maqale.
Warbaahinta dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in la qaaday waxay ugu yeertay Howlgalkii xaqiijinta Sharciga, kaas oo ay iska kaashanayaan qeybaha ciidamada Milateriga Itoobiya, waxaana si weyn loo maqlayaa dagaalka.
Ma jirto warbaahin ka madax banaan labada dhinac oo sheegi karta xaqiiqada dagaalka, balse wararka u dambeeya iyo dhacdooyinka dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa.